होमपेज / कला / बलीवुड / सञ्जय जेलभित्र, मान्यता फिल्म प्रवर्द्धनमा
सञ्जय जेलभित्र, मान्यता फिल्म प्रवर्द्धनमा	25 May 2013 | 15:22pm ११ जेष्ठ, २०७०
एजेन्सी	Be the first to comment! 12345 (1 Vote)
मुम्वई – बलिउड हिरो सञ्जय दत्त पुनेको कडा सुरक्षा रहेको यरवाडा जेलमा दिनरात गुजारिरहेको समयमा उनकी पत्नी मान्यताले उनको व्यवसायलाई अगाडि बढाउन तयार भएकी छिन्। दत्तको फिल्म पुलिसगिरीको प्रवर्द्धनका लागि उनी तयार भएकी छिन्। केएस रविकुमारले निर्देशन गरेको फिल्म जुन ५ मा रिलिज हुँदैछ। फिल्मको प्रवर्द्धनको क्याम्पिङमा मान्यता अर्को सातादेखि सक्रिय हुने भएकी हुन्।
मान्यताले प्रवर्द्धन गर्ने यो फिल्मलाई सञ्जयको महत्त्वकांक्षी फिल्म मानिएको छ। जेल परेका सञ्जयको यो फिल्म १०० करोड क्लवमा छिर्न सक्ने या नसक्ने चासोको विषय बनेको छ। « सलमानकी नयाँ प्रेमिका लुलिया! (तस्बिरहरुसहित)
वेलकम २ मा जोन र सोनाक्षी »
मुन्नाभाइ कैदी नम्बर १६६५६ जेल गए मुन्नाभाई! सर्वोच्चद्वारा सञ्जय दत्तको निवेदन अस्वीकार, जेल जानै पर्ने सञ्जय दत्तले ६ महिना मागे सञ्जय दत्तले माफी अपील नगर्ने प्रतिक्रिया